Fitsarana olom-boafidy :: Mety horaisin’ny PAC ny fanenjehana an’ilay depiote karohina sy ny vadiny • AoRaha
Fitsarana olom-boafidy Mety horaisin’ny PAC ny fanenjehana an’ilay depiote karohina sy ny vadiny
Eo am-pelatanan’ny Fitsarana fandravana didy ny ho avin’ny depiote Razafindrazalie Yvonne, vadin’ilay depiote teo aloha, Raveloson Ludovic Adrien na Leva, izay mbola karohin’ny Fitsarana. Niakatra Fampanoavana teny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (PC) ity depiote vehivavy nisolo toerana ny vadiny ity, omaly. Taorian’izany no nanolorana ny raharaha eo anivon’ny Fitsarana fandravana didy ny PAC, aloha, mba ho fanajana an’ireo dingana rehetra amin’ny fanenjehana na tsia an’ity depioten’i Mahabo ity.
“Anjaran’ny Tonian’ny mpampanoa lalàna ao amin’ny Fitsarana fandravana didy no manapa-kevitra momba ny raharaha. Amin’ny maha olom-boafidy, manana ny samboady maha depiote azy, dia tsy maintsy arahina io dingana io”, hoy ny loharanom-baovao iray ao amin’ny PAC, omaly. Nohazavain’ity lohanom-baovao ity fa: “miandry an’izany fanapahan’ny Fitsarana izany ny PAC vao afaka hiroso amin’ireo dingana samihafa amin’ny fitsarana ny raharaha”.
Voasaringotra amina raharaha kolikoly koa noho izany ity depiote ity, tamin’ny mety ho firaisany tsikombakomba tamin’ny vadiny. Efa nambaran’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta, Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatiana, rahateo, fa: “ahiana ny mety ho fisiana fanambazana vola an’ireo Tonian’ny mpampanoa lalàna izay nanome fahafahana vonjimaika ny depiote Raveloson Ludovic Adrien.
Nambaran’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine fa: “tsy nampahafantarina azy ireo ny momba ny raharaham-pitsarana mikasika ny depiote Razafindrazalie Yvonne”. “Satria efa nivoaka ny fanapahana nataon’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (Hcc) manamarina sy mampanan-kery ny maha depiote azy, dia tokony hisy ny fampahalalana anay ny raharaha”, hoy ny filohan’ny Antenimierampirenena, teny By pass, omaly.
Notsipihin’ity filohana andrimpanjakana ity koa fa: “tsy ao anatin’ny fivoriana ara-potoana no nitrangan’izao raharaham-pitsarana izao”. “Mety ho isan’ny antony tsy nampahafantarana anay momba an’io raharaha io izany”, hoy ihany Razanamahasoa Christine. Ny eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena ao amin’ny sampana fikarohana anefa dia nanamafy fa tsy mbola tena ofisialy ny maha depiote an-dRazafindrazalie Yvonne.
Toetr’andro – Hitondra orana betsaka ilay rivo-doza « Francisco »
Fanenjehina olom-boafidy :: Mety tsy hanana mpisolo toerana intsony ny depioten’i Mahabo